Tofu na kọlịflawa curry na osikapa | Bezzia
Maria onyekwere | 06/04/2021 10:00 | Salads na akwụkwọ nri
Na Bezzia ụbọchị ọ bụla gafere, anyị na-enwe mmasị karịa curry, otu ihe ahụ ọ na-eme gị? Na ọkụkọ na ụtọ nduku Curry na anyị kesara gị ruo afọ atọ gara aga bụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị ma anyị dabere na ya iji mepụta nke a vegan version: tofu na kọlịflawa curry.
Anọchiela ọkụkọ na nsụgharị a site na tofu na akwụkwọ nri ndị ọzọ na mgbakwunye na nduku na-atọ ụtọ abanyela na nhazi. Na uzommeputa a curry enweghị onye ga-ekpuchi ya. Oge a anyị etinyebeghị tomato ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-agbanwe agba ya ma ọ bụ ekpomeekpo ya.
Taa bụ nri siri ike ma zuru ezu, zuru oke iji jee ozi dika otu efere. Nkwadebe ya dị mfe ma ọ gaghị ewe gị karịa 40 nkeji. Ndụmọdụ m bụ ka ị rite uru ma zuru oke maka ụbọchị abụọ. Ya mere, ị nwere ike iri ya otu ụbọchị na osikapa ma rie ya maka nri abalị na-esote ma ọ ga-eri gị otu. Na-anwa anwa ịnwale ya?
1 Efrata maka 3
Efrata maka 3
400 g. tofu, dẹe
1/4 ose mgbịrịgba uhie, gbue
1/2 kọlịflawa, na florets
1 nduku ụtọ, diced
350 ml. aki oyibo
2 teaspoons curry ntụ ntụ
1 teaspoon ụtọ paprika
1/3 teaspoons n'ala cumin
1 teaspoon nke cornstarch etisasịwo na 1/2 iko mmiri
1 iko osikapa esi nri
Kwadebe ihe niile eji eme ihe.
Kpoo mmanu mmanu abuo n'ime ite na saọọ oge tofu Nkeji 8 ma ọ bụ rue mgbe acha ghaa. Ozugbo emechara, wepu ya na pan wee dobe.
N'otu mmanụ Ugbu a ighe yabasị na ose n'oge nkeji iri abụọ.
Emechaa Ebido na kọlịflawa na ụtọ nduku, kpuchie casserole ma mee ka ha sie nri n’ọkụ ruo minit asatọ.
Mgbe 10 nkeji tinye aki oyibo, ngwa nri, ọka na mix. Kwadebe ha dum maka minit 5 ruo 10 ma ọ bụ ruo mgbe nduku ụtọ dị nro.
Na-efe tofu na kọlịflawa curry na osikapa esi nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Salads na akwụkwọ nri » Tofu na kọlịflawa curry na osikapa
Mara mma na ndị bara uru ntuziaka ntapu kọfị